စိတ်ညစ်တဲ့ယ်.. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Entertainment » စိတ်ညစ်တဲ့ယ်..	39
Posted by ムラカミ on Dec 3, 2014 in Entertainment | 39 comments
သူက ခွေးပေါက်စလေးတွေ အားယီး ချစ်တယ်…
ခက်တာက ခွေးပေါက်စတွေက ဈေးကြီးတာရယ်…
ကြီးလာရင် ဘယ်သူမှ ယူချင်သူမရှိတာ တူတူပဲရယ်…
ဟို ကရင်မတွေ စွပ်စွဲသလို လျှော်ရမယ့် ကေတီဗီက ချာတိတ်လည်းမရှိသလို…
ဒတ်ပုံတောင် မရိုက်ချင်တော့ဝူး ဂလောက်အပြောဆိုခံနေရရင်ဖြင့်
နော် ** ပြောတတ်တဲ့အတိုင်းပဲ ပြောပါယဇီ
ခင်ဇော် says: ဗြောင် လိမ်တယ် ကျန်းးးးးးးးးး
မမ မှာတော့ ကြိုးးးးးစားးးးနေလိုက်ရတာာာာာ
မောင်ငေးးး က အသစ်ရှာချင်နေပြီလားးးးးး
ကန္နားစီး မိဂီ says: စိတ်ညစ်တဲ့ယ့်…..
ဂျက်စပဲရိုး says: မမကြီး က ကြိုးစားးးး နေလို့ ထင်ပါတယ် ပါးတွေကို ဖောင်းလို့…
ဆြာဂီ နာမည် ထွက်တဲ့ တူတူ ပျက်သွားတဲ့ ကွန်ပြူတာ အစား iMac တစ်လုံးလောက် စပွန်ဆာ တောင်းပလိုက်… :P
ခင်ဇော် says: အဲ့ နာ့ ဟမ်ဘာဂါကမှ နာ့ ရိက္ခာ။
ကြိုးစား စားမှ အားရှိ
ဂလို ဂလိုတွေမို့ ကြိုးစားနေရတာ။
ဂီ လေး ရယ်။
ဂီလေး လိမ္မာရင် ဂီ လေး ဖို့ချည်းပါပဲ။
ဂီ ပလေးနေတဲ့ ကလေးမတွေကို …
မမယီးရဲ့ အကြွေးတွေနဲ့ ဘွထဲ ကို ဝင်ရောက်လှည့်ပါ။ ခိ။
ခင်ဇော်!! မင်း ပိုင်သကွာ!!!
ကန္နားစီး မိဂီ says: ဟမ်ဘာဂါ နပ်မှန်ဖို့မနည်း ကြိုးစားနေရတာတောင် အားမရသေး အကြွေးကထူသေး
အာ့တောင် စပွန်ဆာပေးဖို့ တွေးသေးတယ်…
ခင်ဇော် says: နာ့ ဖလာတာ နာ …..
နာ့ ဟမ်ဘာဂါကို နပ်မှန်အောင် အေးအေးကျွေးလိုက်…..
နာ့ကို သတိတရဖြစ်နေစေချင်သူဆီက အကြွေးလေး ယူလိုက်…..နဲ့
ရှေ့ဆောင် ဦးရွက် လာပြီး လမ်းပေးကြတာကိုးးး
စပွန်ရှာရှာရမဲ့ အရွယ်ကို ကျော်လွန်ပြီးးးး….
စပွန်ဆာပေးရမဲ့ အသက်ကို စတင်ချဉ်းနင်း ဝင်ရောက်လာပါပေါ့လား ပေါ့။
အလင်းဆက်@မောင်သူရ says: KTV ဆိုလို့
အိုဘားမား လာခါနီး နေပြည်တော်က KTV တွေ ပိတ်ခိုင်းတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး
ကာတွန်းတကွက် ဖတ်ရတာ သွားသတိရတယ်
KTV မယ်တွေက ထိုင်ပြောနေကြတဲ့ပုံနဲ့
အိုဘားမားကို ဘလက်လစ်ထဲ ထည့်လိုက်ပြီအေ တဲ့
သူလာမှပဲ အမြဲဖွင့်ထားတဲ့ KTV ကို ပိတ်ခိုင်းလို့တဲ့
Wow says: နာ့ခညာလည်း ဖလာရီနှစ်စီးတောင်ပေးထားဒါလေ… အိုက်ညက်နှာချောချောလေးကိုထောက်အူး Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8014
ကန္နားစီး မိဂီ says: စိတ်ညစ်တဲ့ယ့် …
၂၀၁၄မှာ ကရင်မ ၄ယောက် ပတ်သတ်မိပါတယ်
တယောက်က ကျုပ် ကေတီဗီ က ဆော် နဲ့ ညပ်နေပါသတဲ့..
နောက်တယောက် ကျ ခီညားမှာ စပွန်ဆာ မမယီး ရှိပါသတဲ့…
နောက်တယောက် ကျ ခီညားကို အရမ်းသဘောကျပါတယ်.. ဒါပေမယ့် ယူမယ့်လူ ရွေးပီး ရှိပီးပါတဲ့…
နောက်ဆုံးတယောက် ကျ ငိုပီး ပြောတယ် …. အစ်ကိုရယ် တဲ့ အစ်ကို လုပ်ချင်တာတွေကို လုပ်ချင်သလို လုပ်ချင်တိုင်းလုပ်လို့ရနေတာ
မိန်းမမယူပါနဲ့တော့တဲ့ …. ဘာလို့လဲ မေးတော့ … အစ်ကို့ ယူတဲ့ မိန်းကလေးက စိတ်ဆင်းရဲလို့ သေမှာပဲတဲ့ …
ကျနော် အဲ့လို လူမှု ဘ၀မှာ အောင်မြင်နေတာပါဆို….
(နောက်ကြုံမှ ရှမ်းမ ၂ယောက်အကြောင်း ပြောပြအုံးမယ်အေ..ဗြဲ)
သများလည်း မိန်းမ လိုချင်တာပေါ့လို့…
ခင်ဇော် says: မိန်းမ ကံ မကောင်းဝူး ထင်ပါရဲ့ အေ။
တာမွေဘက်က ကိုခင်ဇော် နဲ့ ဆက်ပေးမယ်။ သူ့မှာလည်း အစားပုပ်တဲ့ ကရင်မလေး ရှိသေးတယ်။
Wow says: ယောက်ကျားယူပါလား သများရယ်… တူညားရင်ဖွင့်ပါမဲ့အရေး ဘူးသီးစပါးမှာ မျောက်လုံးပေါ်က သခွားသီးလေးတွေ ဖယ်ဖယ်ပြီး ၀ရံတာမှာ ဖုန်းထွက်ထွက်ဖြေနေရထဲက ညီးကို စိတ်နာထှာအေ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12373
ခင်ဇော် says: အာ့ကြောင့် ….
နာ့ ကို ဖုန်းနံပတ် တောင်းတာ မပေးလို့
ဒီ အရေတွေ ကြိုမြင်တာ ခင်ဇော် မင်းပိုင်သကွာ!!!! နို့မို့ နာ့ အာခီမီးဒီးထက် ဆိုးသွားစိုးလို့။ Was this answer helpful?LikeDislike 2805
Wow says: အာ့ပေါဒါအေ ကောင်းစားချိန်ကျ နာတို့မာ မသိလိုက်ရ … တော်ဘီ နောက်ထပ် စပွန်စာဒီတျောက်ကို မပေးနဲ့တော့ ချွိ Was this answer helpful?LikeDislike 8014
ကန္နားစီး မိဂီ says: စိတ်ညစ်တဲ့ယဲ့…
surmi says: 2014 မှာ ၄ ယောက်တောင်မှလားကွယ်
ဒါနဲ့ သူတို့ပြောတော့ မျှစ်ဘဲ ချိုးကျွေးရ ကျွေးရဆို Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2805
Wow says: ခုတော့ ၀ါးအလုံးလိုက်နဲ့ရိုက်… အဲလေ… ချက်ကျွေးဒယ်ဆိုလားပါ ဆာဆာရယ် Was this answer helpful?LikeDislike 12373
ခင်ဇော် says: ချိုးကျွေးမဲ့ မျှစ်တွေ အရွယ်ရောက်တဲ့ထိ အဆင်မပြေပဲ
ဝါးလုံး နင်းမိ ဝါးခြမ်းနင်းမိ ဖြစ်တာတို့ ဘာတို့။
Kaung Kin Pyar says: .နောက်တယောက် ကျ ခီညားမှာ စပွန်ဆာ မမယီး ရှိပါသတဲ့…
.ခင်ဗျားစကားကို ပြန်ပြင်လိုက် ကိုဂီ…။ အိုက်ကရင်မ ပြောခဲ့တာ အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး…။ ခင်ဗျား .သိပါတယ်…။ ဘာလို့ စကားကိုလှည့်ပြောရလဲ…
.တခြားတစ်ယောက်ကို တရွာလုံးနဲ့ ရန်လိုက်တိုက်တဲ့နည်းတော့ မသုံးနဲ့…
ကန္နားစီး မိဂီ says: အေးဗျာ ဟုတ်ပါတယ်… အဲ့ကရင်မလေးက လူကောင်းလေးပါ….
စိတ်ထားလေးလည်း အားယီး ပြည့်ရှာတယ်..
ဟောဒိ မသာယီးသာ မကောင်းဆိုးဝါးယီးပါ…
Kaung Kin Pyar says: .ဟိုလူ့စိတ်ဓာတ်တွေ၊ ဒီလူမသာယီးတွေ မသိဘူး…။ ကွကိုယ် .သိပ်တော်လှတတ်လှ..စိတ်ထားပြည့်လှလဲ တစ်ခါမှ မတွေးဖူးဘူး….။
.စိတ်ထားလဲ နေရာတိုင်း မပြည့်နိုင်ဘူး….
.ခင်ဗျားစကားပြော မှားနေတယ်…. အဲ့ဒါလာပြောတာ…..
.ခင်ဗျားနဲ့ တခြားလူတွေ အဲ့ဒါ သိရင် ပြီးတာပဲ…
ကန္နားစီး မိဂီ says: စိတ်ညစ်တဲ့ယ့်…
အဲ့ကရင်တေ ကိုတော့ … မမယီးနဲ့ တိုင်ရမား …
မိညီမ နဲ့ တိုင်ရမား ..
(ဒါတောင် မွန်ပီသစ်ပါတီရယ်… မြစ်ဆုံက အမျိုးတေရယ် မပါတေးဝူးရယ်)
kyeemite says: ဘာဘာ ဘာမှမပြောတော့ဘူး
ဦးကျောက်ခဲ says: အန်တီဆွိ… အဲ အဆိုတော် မေဆွိက သီချင်းတောင် လုပ်ဆိုဖူးသေးတယ်…
စိတ်ညစ်ရင် ဂီတာတီးပါလား ကိုကိုရယ်… တဲ့…
အဲသည်တော့ တီးချင်တာ အားရပါးရသာ တီးပလိုက်… ခွိ ခွိ
ကန္နားစီး မိဂီ says: အာ့​ပြောတာအူး​လေးယာ
Iris says: ဟယ်​..ဒီလူကြီး​ပြောတာ​တွေထူးဆန်းတယ်​။ လွှတ်​​တော်​မှာသွား​ဆွေး​နွေးရင်​ ​တော်​​တော်​ ​ကောင်းမဲ့ ရလာဒ်​​တွေထွက်​လာမှာ။ ဦးဦးဘူးလက်​နဲ့သွားတိုင်​ပင်​ပါလား။
ကန္နားစီး မိဂီ says: စိတ်​ညစ်​တဲ့ယ့်​
Ma Ma says: ကရင်မက ၄ယောက်၊ ရှမ်းမက ၂ ယောက်ဆိုတော့ကာ………
ညည်းကြွား ကြွား သွားတယ်တဲ့။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8014
ကန္နားစီး မိဂီ says: စိတ်ညစ်တဲ့ယ့် …. ဂယ် ဂယ်..မာမားရယ်…
Mr. MarGa says: တိုင်းရင်းသား ချစ်ကြည်ရေး လုပ်နေသလား ကိုရင်
ကန္နားစီး မိဂီ says: အမ်ပီစီမှာ တနေရာ ရမလားလို့ပေါ့ဗျာ. ..
အပြင်မှာ လုပ်စားကိုင်စားရ ခက်တယ်လေ..
စောနတောင် ဒ၀ယ်လေးတွေ ဂီတာတီးတာ သွားဆိုပေးခဲ့သေးတယ်…
အပေါ်ထပ်က ခြေထောက်သိပ်လှတဲ့ ကရင်မလေးတွေ အတွက်…
Mr. MarGa says: ခီညားတော့
ကရင်တွေ လက်ချက်နဲ့ ငုတ်တုတ်မေ့ကိန်း မြင်တယ် ကိုရင်
ခုထိ ကရင်တောက မထွက်နိုင်သေးဘု…… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8014
ကန္နားစီး မိဂီ says: ဘာယို့ မထွက်နိုင်ရမတုန်း…. ကျုပ်က တခြား သဗုံတေနဲ့လည်း ငြိမ်းချမ်းရေး ဂျပန်ထိ သွားယူထားတာ …
Crystalline says: နီ​သေသင့်​တယ်​.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 4812
မွသဲ ( 17082011 ) says: စိတ်ညစ်တဲ့ယ့် ရူးတော့မဲ့ယ့် နင်အတော်လွန်နေတဲ့ယ့်
ကန္နားစီး မိဂီ says: သဂျိုင်ခီးရေးထားတာတော့
မွသဲ ( 17082011 ) says: တေပါဟဲ့ယ့်
CharTooLan says: ဂလုချက်ဖတ်နေရသလိုဘဲ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 506
ရာမည says: မိန်းမတွေရဲ့အချစ်က နှဲသမားပါးစပ်လိုပဲခင်ဗျ
မြစပဲရိုး says: သများပြောဖို့ ကျောက်စ် ဦးသွားတယ်။
ဂလိုဆိုတော့ စိုင်းထီးဆိုင် လာမယ်။
“သေသူရဲ့ အနီးအနားမှာ ကိုယ်တစ်ယောက်ထဲ သွေးစွန်းဓား နဲ့” ဆိုတဲ့ သီချင်း ရှိတယ်။
ခေါင်းစဉ် က “မျဉ်းကြား” ထင်ရဲ့။
အဲဒါ မောင်ဂီ့ လို ဟာလေး လိုမျိုး ကို ရေးထားတာ။
ကိုယ်လုပ်ချင်တာလုပ်ထားပြီး ပျော်ရင် ပြီးတာဘဲ နော။
သူများ ဂရုစိုက်သေး တယ်လား။
ကွန်စီးကွဲ့ယ့်… ကို စိတ်ညစ်တဲ့ယ့်… မလုပ်ရဘူးလေ။
PS – ဒါလဲ မန့်တာ တစ်လွဲ ဘဲ ထင်ရဲ့။ lol:-)))))